Fri, Mar 22, 2019 | 11:47:54 NST
काठमाडौं, जेठ ३ – नेपाली क्रिकेट टिमका मुख्य प्रशिक्षक जगत टमाटा एनएसजेएफ स्पोर्ट्स अवार्डमा उत्कृष्ट प्रशिक्षक बनेका छन् ।
जेठ ३ – ‘मण्डेला सेन्तेनारी’ फुटबलको उपाधि स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाले जितेको छ ।
जेठ ३ – युरोपा लिगको उपाधि स्पेनिस क्लब एथलेटिको मड्रिडले जितेको छ । मार्सेललाई ३–० ले हराउँदै एथलेटिकोले तेस्रो युरोपा लिग उपाधि जितेको हो ।
जेठ ३ –आईपीएल क्रिकेटमा मुम्बई इण्डियन्सले रोमाञ्चक जितसँगै महत्वपूर्ण २ अंक थपेको छ । बुधबार रातिको खेलमा मुम्बइले किंग्स इलाभेन पञ्जावलाई ३ रनले हराएको हाे ।
काठमाडौं, जेठ २ – लामो समयदेखि सञ्चालन हुन नसकेको ए डिभिजन लिग आउँदो असोज ३ गतेदेखि हुने भएको छ ।
वर्षकै उत्कृष्ट बने म्यान्चेष्टर सिटीका प्रशिक्षक
जेठ २ – लिग प्रशिक्षक संघले म्यान्चेष्टर सिटीका प्रशिक्षक पेप ग्वार्डिओलालाई वर्षको उत्कृष्ट प्रशिक्षक घोषित गरेको छ ।
जेठ २ – आईपीएल क्रिकेटमा कोलकाताले राजस्थानलाई ६ विकेटले पराजित गरेको छ ।
​पीएसजीले ल्यायो नयाँ प्रशिक्षक
जेठ १ – जर्मन क्लब बोरसिया डर्टमन्डका पूर्व प्रशिक्षक थोमस टुचेल फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेनको प्रशिक्षकमा नियुक्त भएका छन् ।
जेठ १ – चोटग्रस्ट नेइमारलाई समेट्दै ब्राजिलले विश्वकप फुटबलका लागि खेलाडीहरुको अन्तिम टोलीको घोषणा गरेको छ ।
फुटबलका लिजेण्ड शाहको अन्त्येष्टि आज गरिने
काठमाडौं, जेठ १ – नेपालका पूर्व राष्ट्रिय फुटबलर मणि शाहको आज अन्त्येष्टि गरिने भएको छ ।
पञ्जाबमाथि बेंग्लोरको सहज जित
जेठ १ – इण्डिन प्रिमियर लिग क्रिकेट अन्तर्गत सोमबार राति भएको लो स्कोरिङ म्याचमा बेंग्लोर विजयी भएको छ ।
​पूर्व नेपाली फुटबलर मणि शाह अस्पताल भर्ना
काठमाडौं, वैशाख ३१ – पूर्व नेपाली फुटबलर मणि शाह अस्पताल भर्ना भएका छन् ।
​को–को परे एनएसजेएफ अवार्डको मनोनयनमा ?
काठमाडौं, वैशाख ३१ – नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले प्रदान गर्ने पल्सर स्पोर्टर्स अवार्ड, २०७४ अन्तर्गत बाँकी चार विधाका खेलाडीको मनोनयन सोमबार सार्वजनिक गरेको छ ।
हाइटी पुगेर तयार पारिएको विश्वकपको ‘थिम सङ’ (भिडियो)
काठमाडौं, वैशाख ३१ – फिफा विश्वकप फुटबल २०१८ का लागि कोकाकोलाले आफ्नो प्रायोजित थिम ‘कलर्स’ नामक गीत सार्वजनिक गरेको छ ।
वैशाख ३१ – स्पेनिस लालिगा फुटबलको सिंगो सिजन अपराजित रहने बार्सिलोनाको सपना चकनाचुर भएको छ ।
स्टोक, वेष्टब्रम र स्वान्सी रेलिगेशनमा
वैशाख ३१ – स्टोक सिटीसँग पराजित हुँदै स्वान्सी सिटी रेलिगेशनमा परेको छ ।
२२ वर्षको अन्तिम खेलमा वेङ्गरलाई सान्त्वना खुशी
वैशाख ३१ – प्रियिमर लिग फुटबलमा आर्सनलले हडल्सफिल्ड टाउनलाई १–० ले हराएको छ ।
चेल्सीले युरोपा कप मै चित्त बुझाउनुपर्ने
वैशाख ३० – साविक विजेता चेल्सी च्याम्पियन्स लिग फुटबलको अर्को सिजनका लागि भने छनोट हुन असफल भएको छ ।
वैशाख ३१ – च्याम्पियन्स लिगको जारी सिजनको उपाधिका लागि रियल मड्रिडसँग खेल्न लागेको लिभरपुलले अर्को सिजनको च्याम्पियन्स लिगका लागि स्थान सुरक्षित गरेको छ । शनिबार रातिको खेलमा ब्राइटन एण्ड होभ अल्विअनलाई ४–० ले हराउँदै लिभरपुलले प्रिमियर लिगमा चौथो अर्थात च्याम्पियन्स लिगका लागि स्थान सुरक्षित गरेको हो । लिभरपुलको जितमा मोहमद सलाह, डेजान लोभरेन, डोमिनिक सोलान्के र एन्ड्रु रोबर्टसनले गोल गरेका थिए । लिभरपुलले ७५ अंक जोडेको छ ।...
प्रिमियर लिगको अन्तिम मिनेटमा गोल गर्दै सिटीले बनायो कीर्तिमान
वैशाख ३१ – इंग्लिस प्रिमियर लिगको अन्तिम खेलमा जित हात पार्दै म्यान्चेष्टर सिटीले एक सय अंकको कीर्तिमान बनाएको छ ।
वैशाख ३१ – आईपीएल क्रिकेटमा राजस्थान रोयल्सले मुम्बई इण्डियन्सलाई ७ विकेटले हराएको छ ।
राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगितामा प्रदेश ७ र प्रदेश ४ बाहिरियो
रोल्पा, वैशाख ३० – रोल्पामा जारी प्रथम सभामुख कप राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिता पुरुषतर्फ आइतबारको खेलमा विभिन्न आठ क्लब क्वार्टरफाइनलमा प्रवेश गरेका छन् ।
​इंलिस प्रिमियर लिग : चेल्सी र लिभरपूलको भाग्यपरीक्षा
वैशाख ३० – इंलिस प्रिमियर लिग फुटबलको यो सिजनको अन्तिम खेलमा चेल्सीले न्यूकासलसँग र लिभरपूलले ब्राइटनसँग खेलिरहेका छन् ।
आईपीएलमा हैदराबादद्वारा चेन्नइलाई १ सय ८० रनको लक्ष्य
वैशाख ३० – आईपीएल क्रिकेट अन्तर्गत आइतबारको पहिलो खेलमा सनराइजर्स हैदराबादले चेन्नई सुपरकिङ्सलाई १ सय ८० रनको लक्ष्य दिएको छ ।
आईपीएलमा ‘डेब्यू’पछि के भने सन्दीपले ? (भिडियो)
वैशाख ३० – आईपीएलमा दिल्ली डियरडेभिल्सबाट शनिबार डेब्यू गरेका बलर सन्दीपले आफू खेलबाट सन्तुष्ट भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।